" हामी हारेजस्तो देखिन्छ, तर पार्टी बचाउन संयमता अपनाएका हौँ" : प्रचण्ड - VOICE OF NEPAL
२९ श्रावण २०७७, बिहीबार २३:०२
115 ??? ???????
लामो समयको संवादहीनतापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग नेकपाको विवाद समाधानका लागि प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
बिहीबार बालुवाटारमा भएको छलफलमा ओली र महासचिव विष्णु पौडेलले प्रचण्डलाई सरकारका निर्णयहरु सचिवालय बैठकबाट अनुमोदन गर्ने, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने, ओलीले आफ्ना कमीकमजोरीप्रति आत्मालोचना गर्ने र त्यसको बदलामा पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्रीमा ओली नै कायम रहेनगरी सहमतिको प्रस्ताव गरेका छन्।
बुधबार साँझ एक टेलिभिजन कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पाँच दिनभित्र पार्टीभित्रका समस्या समाधान हुने बताएका थिए। त्यसलगत्तै बिहीबार छलफल सुरु भएको हो।
ओलीको प्रस्तावपछि प्रचण्ड अन्य नेताहरुसँग छलफल गरेर जवाफ दिने भन्दै बाहिरिएका थिए। बुधबार शंकर पोख्रेलले प्रचण्डलाई भेटेर बिहीबारको बैठकको चाँजो मिलाएका थिए।
बिहीबारको बैठकपछि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, नारायणकाजी श्रेष्ठसहितको प्रदेश ५ का केन्द्रीय सदस्यहरुको भेलामा पुगी प्रचण्डले बालुवाटारमा आएका प्रस्तावको बारेमा जानकारी गराएका थिए। सो जमघट काठमाडौंको थापागाउँस्थित एक कलेजमा भएको थियो।
भेलामा अध्यक्ष प्रचण्डले लामो समयपछि संवाद सुरु हुनु नै सकारात्मक भएको जानकारी दिएका थिए।
‘बैठकमै आउँदिन र जे निर्णय गर्न मन लाग्छ त्यही गर भनेको अवस्थामा छलफल सुरु हुनु राम्रै कुरा हो,’ भेलामा प्रचण्डले भनेका थिए।
‘बाहिरबाट हेर्दा हामी हारेजस्तो देखिन्छ। तर, यो हारेको होइन हामीले संयमता अपनाएको हो। पार्टीलाई विधि प्रक्रियाअनुसार चलाउन हामीले चालेको कदम हो,’ प्रचण्डको भनाइ उधृत गर्दै एक नेताले भने, ‘हामी अपमानित भएर पनि सहेर बसेका छौँ। पार्टी एकता, परिवर्तन र जनआकांक्षाका जोगाउन सहेर बसेका हौँ।’
ओलीले केही हदसम्म आफ्नो गल्ती महसुस गरे पनि पूरै सहमतिमा आइनसकेको उनको भनाइ थियो।
भेलामा नेता नेपालले पनि बोलेका थिए। उनले पनि पदका लागि नभई पार्टीभित्र विधि र पद्धतिका लागि आफूहरुको संघर्ष भएको जानकारी गराएका थिए। सो भेलामा प्रदेश ५ का २० जना केन्द्रीय सदस्यहरु सहभागी थिए। एक दिनअघि पनि प्रचण्ड र नेपालले गण्डकी प्रदेशका केन्द्रीय सदस्यरुको भेला गरेका थिए।
केन्द्रीय सदस्यहरुसँगको भेटपछि सचिवालय र स्थायी कमिटी सस्यहरुबीच केही समय छलफल भएको थियो।
‘प्रचण्डले बालुवाटारबाट केन्द्र र प्रदेशका मन्त्रिपरिषदको पुनर्गठन, सरकार सञ्चालनको महत्वपूर्ण निर्णयहरु सचिवालयबाट गराउने प्रस्ताव आएको जानकारी गराउनु भएको छ,’ छलफलपछि एक स्थायी कमिटीका सदस्यले भने, ‘पछिल्लो घटनाक्रमको बारेमा छलफल गर्ने भनिएपछि खासै केही भएन।’
प्रदेश सरकारको पुनर्गठन भनेको मुख्यमन्त्रीहरु समेत परिवर्तन गर्ने प्रस्तावका रुपमा प्रचण्ड तथा नेपाल पक्षले लिएका छन्।
पार्टीभित्रको विवादको कारण असार १० गते सुरु भएको स्थायी कमिटीको बैठक अन्यौलमा परेको छ। प्रचण्ड–नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्ष मध्ये एक पद छाड्न ओलीलाई दबाब दिँदै आएका छन्। ओलीले दुवै पद नछाड्ने तर अन्य विषयमा छलफल हुनसक्ने बताएका छन्।
बिना अक्सिजन १० पटक सगरमाथा आरोहण गरेका हिम चितुवा आङरिता शेर्पा रहेनन् ! ( भिडियो सहित )
बाग्लुङका पहिरो पीडितलाई पोर्चुगलबाट ९ लाख ४० हजार आर्थिक सहयोग !
भारतमा कोरोनाभाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या ९० हजार नाघ्यो